Banaanbaxyo ka dhacaya Qaahira iyo amniga oo si weyn loo adkeeyey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Banaanbaxyo ka dhacaya Qaahira iyo amniga oo si weyn loo adkeeyey
Banaanbaxyo ka dhacaya Qaahira iyo amniga oo si weyn loo adkeeyey
Maanta oo Salaasa ah ayaa lagu wadaa in gelinka danbe ay banaanbaxyo balaaran ay ka dhacaan magaalada Qaahira ee caasimada Masar, banaanbaxyadan ayaa horudhac u ah diidmada ay shacabka qaarkiis diidan yihiin Dastuurka cusub.
Kooxaha mucaaridka ayaa maanta ku baaqay in shacabka isugu soo baxaan mudaharaadyada looga soo horjeedo dastuurka aftida loo qaadi doono maalinimada Sabtida ah.
Sidoo kale taageerayaasha Madaxweyne Maxamed Morsi ayaa ayaguna ku baaqay in ay isugu soo baxaan banaanbax taageero ah, arrintan oo keeni karta isku dhac markale dhexmara labada dhinac.
Todobaadkii lasoo dhaafay ayey ugu yaraan 7 qof ku dhinteen shaqaaqooyin dhexmaray mucaaridka iyo taageerayaasha Madaxweynaha oo gacanta isula tagay.
Madaxweyne Morsi ayaa asagu dib uga gurtay go’aan uu horey u qaatay oo uu awoodiisa ku balaariyey, balse wuxuu Madaxweynaha diiday dib u dhigo xiliga loo qoondeeyey in la qaado aftida Dastuurka oo ku beegan 15ka December oo ah Sabtida soo socota.
Ciidamada Militariga ayaa awoodo dheeraad ah lasiiyey in ay xiri karaan dadka shacabka ah iyo inay difaaci karaan xarumaha dowlada. Waxaa sidoo kale la xiray wadooyinka taga xarunta Madaxtooyada ee magaalada Qaahira.